မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို ​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ - Myitter
September 3, 2019 Myitter ဗဟုသုတအစုံ 0
မနက်​ဆို မိန်းမ ပဲပြုတ်​သည်​ အသံ​တွေကြားမှာ “ပဲပြုတ်​ နံပြား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကြားပြီဆို..​ပြေး ​ပြေးဝယ်​ရတာ အ​မော….အရင်​က​တော့ အဖွားက ​အော်​​ပေးတာပါ..အခု​နောက်​ပိုင်း အဘ ကိုယ်​တိုင်​ ​အော်​​’နေပြီ​လေ…
သူတို့လင်​မယားကို သ​ဘောကျတယ်​​…မလှိုင်​နားရွာတစ်​ရွာက ဇာတိတဲ့…သား​ထောက်​သမီးခံ မရှိ…အဘ အသက်​ ၈၄ နှစ်​ အဖွားအသက်​ ၇၆ နှစ်​ တဲ့… သူတို့ကို မြင်​တိုင်း ​တွေးမိတာ…
တစ်​ကယ့်​ကို ​မောင်​တထမ်း မယ်​တရွက်​ပါပဲ…အဖွားက ဒူးမ​ကောင်းလို့ လမ်း​ကောင်း​ကောင်းမ​လျှောက်​နိုင်​ဘူး​လေ…တစ်​မနက်​​လေး​ရောင်းရင်​ အမြတ်​ ၃၀၀၀ ကျပ်​ပဲ ရသတဲ့…လမ်း​လျှောက်​ဖြစ်​​အောင်​ မနက်​တိုင်း​ ရောင်းတယ်​လို့ အဘက ​ပြောတာပဲ
ဘဝတစ်​ခုမှာ အသွင်​လည်း​တူတဲ့….ဘဝတ​လျှောက်လုံးအတွက် ​​မှန်​ကန်​တဲ့ အ​ဖော်​မွန်​ကောင်း ​​တစ်​​ယောက်​ရဖို့ ဆိုတာ…အင်​မတန်​မှ ခက်​ခဲလှပါတယ်​…လူ့ပြည်​က အပ်​တစ်​စင်းနဲ့ နတ်​ပြည်​က အပ်​တစ်​စင်း ဆုံဖို့ မလွယ်​သလိုပဲ…
အများစုက အိမ်​​ထောင်​ပြုချိန်​တန်​လို့ ပြုလိုက်​ကြတာ…မိဘ စိတ်​ချမ်းသာ​စေဖို့ ပြုတာ…ကိုယ့်​ကို အမှန်​ချစ်​တယ်​ ထင်​လို့ ပြုတာ…အဲ့လို​တွေ ကြားထဲမှာ….ကိုယ့်​ကို ​ပျော်​ရွှင်​​စေမယ့်​…ကိုယ့် ​ပျော်​ရွှင်​မှုကို အမှန်​ တန်​ဘိုးထား လိုလားတဲ့ အိမ်​​ထောင်​ဖက်​ထက်​ပိုတဲ့ အ​ဖော်​မွန်​​ကောင်းရရှိဖို့ဟာ သိပ်​ကို ခက်​ခဲလှပါတယ်​
တချို့​တွေလည်း ကံစွပ်​ပြီး မှန်​ကန်​သွားကြတာ ရှိ​ပေမယ့်​ …၆၀% ​သော ဒီက အိမ်​​ထောင်​​ရေး​တွေက​တော့…သားသမီး​ကြောင့်​…​စောင့်​ထိန်းရမယ့်​ ကျင့်​ဝတ်​​ကြောင့်​…မိဂုဏ်​ ဖဂုဏ်​​ကြောင့်​…​ဆွေဂုဏ်​ မျိုးဂုဏ်​​ကြောင့်​…ဝတ္တရား​ကြောင့်​… စတဲ့…စတဲ့ `​ကြောင့်​´ ​တွေ​ကြောင့်​ ​ပျော်​ရွှင်​မှု​တွေ မရရှိ​တော့သည့်​တိုင်​…
သည်းခံ မြိုသိပ်​ ​ပေါင်းဖက်​​နေရတဲ့ အိမ်​​ထောင်​ရေး​​ အ​ခြေအ​နေ​တွေ ကြားထဲမှာ….ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖွားရယ်​…မြန်​မာပြည်​သိန်းတန်​ တို့ ဇနီး​မောင်​နှံ ရယ်​က​တော့…​တွေ့မြင်​ဖူးသမျှထဲမှာ…အမှန်​ကို နတ်​ဖက်​တဲ့ ဖူးစာရယ်​ပါ….
တချို့ဆို ဘဝ​နေဝင်​ချိန်​ ​ရောက်​သည်​အထိ ကိုယ်​နဲ့ လိုက်​ဖက်​တဲ့ အသည်းတစ်​ခြမ်း ကို လုံးလုံး ရှာမ​တွေ့သွားကြပါဘူး….😥အိမ်​​ထောင်​တစ်​ခု အတွက်​ အ​ခြေခံကျဆုံးက နှစ်​​ယောက်​စလုံးက ကိုယ့်​ကမ္ဘာကချည်း ကြည့်​ပြီး ​တောင်းဆို​နေလို့ မရဘူး​လေ…
တဖက်​သားကမ္ဘာ​လေးကိုလည်း ခံစား​ပေးတတ်​အုံးပါမှ…နှစ်​​ယောက်​လုံး ညှိနှိုင်းလို့ ရဖို့ကလည်း …စိတ်​အ​ခြေခံ​တွေ ခံယူချက်​​တွေ မ​ဝေးကွာပါမှ…သိပ်​ကွာ​ဝေးလွန်းပြန်​လည်း…ဘယ်​လိုမှ ညှိလို့မရဘူး​လေ…အ​ခြေခံ တန်း​လေးတစ်​ခု တူပါမှ
ဒီ​နေ့​တွေးမိတာ​လေးပါ…ဘဝတစ်​ခု သူများ​တွေ တိုင်းတာတဲ့…စံနှုန်း​တွေ​လောက်​ ပြည့်​စုံကြွယ်​ဝ ချမ်းသာမှု မရှိကြ​ပေမယ့်​…အိမ်​​ထောင်​ဖက်​တစ်​ဦးထက်​ ပိုတဲ့…ဘဝအ​ဖော်​မွန်​​ကောင်း တစ်​ဦးရဲ့…
​ဖေးကူမမှု​တွေနဲ့ ….အ​ပေးအယူမျှပြီး စိတ်​ချမ်းသာ​နေတဲ့ ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖွားရဲ့ အိမ်​​လေးဟာဖြင့်​…သေးငယ်​​ပြီး မထည်ဝါ​သည့်​တိုင်​…>>>”​မေတ္တာ​တွေ လွှမ်းခြုံတဲ့ အိမ်​”“နှလုံးသား​တွေ ​နွေး​ထွေး​လုံခြုံစေတဲ့ အိမ်​” ဖြစ်​​နေမှာ ဧကန်​မလွဲ ပါပဲ…💞 ​ဒီလိုအိမ်​💞
မနကျ​ဆို မိနျးမ ပဲပွုတျ​သညျ​ အသံ​တှကွေားမှာ “ပဲပွုတျ​ နံပွား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကွားပွီဆို ​ပွေး ​ပွေးဝယျ​ရတာ အ​မော….အရငျ​က​တော့ အဖှားက ​အျော​​ပေးတာပါ
မနကျ​ဆို မိနျးမ ပဲပွုတျ​သညျ​ အသံ​တှကွေားမှာ “ပဲပွုတျ​ နံပွား” ဆိုတဲ့ ​အဘ အသံကွားပွီဆို..​ပွေး ​ပွေးဝယျ​ရတာ အ​မော….အရငျ​က​တော့ အဖှားက ​အျော​​ပေးတာပါ..အခု​နောကျ​ပိုငျး အဘ ကိုယျ​တိုငျ​ ​အျော​​’နပွေီ​လေ…
သူတို့လငျ​မယားကို သ​ဘောကတြယျ​​…မလှိုငျ​နားရှာတဈ​ရှာက ဇာတိတဲ့…သား​ထောကျ​သမီးခံ မရှိ…အဘ အသကျ​ ၈၄ နှဈ​ အဖှားအသကျ​ ၇၆ နှဈ​ တဲ့… သူတို့ကို မွငျ​တိုငျး ​တှေးမိတာ…
တဈ​ကယျ့​ကို ​မောငျ​တထမျး မယျ​တရှကျ​ပါပဲ…အဖှားက ဒူးမ​ကောငျးလို့ လမျး​ကောငျး​ကောငျးမ​လြှောကျ​နိုငျ​ဘူး​လေ…တဈ​မနကျ​​လေး​ရောငျးရငျ​ အမွတျ​ ၃၀၀၀ ကပျြ​ပဲ ရသတဲ့…လမျး​လြှောကျ​ဖွဈ​​အောငျ​ မနကျ​တိုငျး​ ရောငျးတယျ​လို့ အဘက ​ပွောတာပဲ
ဘဝတဈ​ခုမှာ အသှငျ​လညျး​တူတဲ့….ဘဝတ​လြှောကျလုံးအတှကျ ​​မှနျ​ကနျ​တဲ့ အ​ဖျော​မှနျ​ကောငျး ​​တဈ​​ယောကျ​ရဖို့ ဆိုတာ…အငျ​မတနျ​မှ ခကျ​ခဲလှပါတယျ​…လူ့ပွညျ​က အပျ​တဈ​စငျးနဲ့ နတျ​ပွညျ​က အပျ​တဈ​စငျး ဆုံဖို့ မလှယျ​သလိုပဲ…
အမြားစုက အိမျ​​ထောငျ​ပွုခြိနျ​တနျ​လို့ ပွုလိုကျ​ကွတာ…မိဘ စိတျ​ခမျြးသာ​စဖေို့ ပွုတာ…ကိုယျ့​ကို အမှနျ​ခဈြ​တယျ​ ထငျ​လို့ ပွုတာ…အဲ့လို​တှေ ကွားထဲမှာ….ကိုယျ့​ကို ​ပြျော​ရှငျ​​စမေယျ့​…ကိုယျ့ ​ပြျော​ရှငျ​မှုကို အမှနျ​ တနျ​ဘိုးထား လိုလားတဲ့ အိမျ​​ထောငျ​ဖကျ​ထကျ​ပိုတဲ့ အ​ဖျော​မှနျ​​ကောငျးရရှိဖို့ဟာ သိပျ​ကို ခကျ​ခဲလှပါတယျ​
တခြို့​တှလေညျး ကံစှပျ​ပွီး မှနျ​ကနျ​သှားကွတာ ရှိ​ပမေယျ့​ …၆၀% ​သော ဒီက အိမျ​​ထောငျ​​ရေး​တှကေ​တော့…သားသမီး​ကွောငျ့​…​စောငျ့​ထိနျးရမယျ့​ ကငျြ့​ဝတျ​​ကွောငျ့​…မိဂုဏျ​ ဖဂုဏျ​​ကွောငျ့​…​ဆှဂေုဏျ​ မြိုးဂုဏျ​​ကွောငျ့​…ဝတ်တရား​ကွောငျ့​… စတဲ့…စတဲ့ `​ကွောငျ့​´ ​တှေ​ကွောငျ့​ ​ပြျော​ရှငျ​မှု​တှေ မရရှိ​တော့သညျ့​တိုငျ​…
သညျးခံ မွိုသိပျ​ ​ပေါငျးဖကျ​​နရေတဲ့ အိမျ​​ထောငျ​ရေး​​ အ​ခွအေ​နေ​တှေ ကွားထဲမှာ….ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖှားရယျ​…မွနျ​မာပွညျ​သိနျးတနျ​ တို့ ဇနီး​မောငျ​နှံ ရယျ​က​တော့…​တှမွေ့ငျ​ဖူးသမြှထဲမှာ…အမှနျ​ကို နတျ​ဖကျ​တဲ့ ဖူးစာရယျ​ပါ….
တခြို့ဆို ဘဝ​နဝေငျ​ခြိနျ​ ​ရောကျ​သညျ​အထိ ကိုယျ​နဲ့ လိုကျ​ဖကျ​တဲ့ အသညျးတဈ​ခွမျး ကို လုံးလုံး ရှာမ​တှသှေ့ားကွပါဘူး….😥အိမျ​​ထောငျ​တဈ​ခု အတှကျ​ အ​ခွခေံကဆြုံးက နှဈ​​ယောကျ​စလုံးက ကိုယျ့​ကမ်ဘာကခညျြး ကွညျ့​ပွီး ​တောငျးဆို​နလေို့ မရဘူး​လေ…
တဖကျ​သားကမ်ဘာ​လေးကိုလညျး ခံစား​ပေးတတျ​အုံးပါမှ…နှဈ​​ယောကျ​လုံး ညှိနှိုငျးလို့ ရဖို့ကလညျး …စိတျ​အ​ခွခေံ​တှေ ခံယူခကျြ​​တှေ မ​ဝေးကှာပါမှ…သိပျ​ကှာ​ဝေးလှနျးပွနျ​လညျး…ဘယျ​လိုမှ ညှိလို့မရဘူး​လေ…အ​ခွခေံ တနျး​လေးတဈ​ခု တူပါမှ
ဒီ​နေ့​တှေးမိတာ​လေးပါ…ဘဝတဈ​ခု သူမြား​တှေ တိုငျးတာတဲ့…စံနှုနျး​တှေ​လောကျ​ ပွညျ့​စုံကွှယျ​ဝ ခမျြးသာမှု မရှိကွ​ပမေယျ့​…အိမျ​​ထောငျ​ဖကျ​တဈ​ဦးထကျ​ ပိုတဲ့…ဘဝအ​ဖျော​မှနျ​​ကောငျး တဈ​ဦးရဲ့…
​ဖေးကူမမှု​တှနေဲ့ ….အ​ပေးအယူမြှပွီး စိတျ​ခမျြးသာ​နတေဲ့ ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖှားရဲ့ အိမျ​​လေးဟာဖွငျ့​…သေးငယျ​​ပွီး မထညျဝါ​သညျ့​တိုငျ​…>>>”​မတ်ေတာ​တှေ လှမျးခွုံတဲ့ အိမျ​”“နှလုံးသား​တှေ ​နှေး​ထှေး​လုံခွုံစတေဲ့ အိမျ​” ဖွဈ​​နမှော ဧကနျ​မလှဲ ပါပဲ…💞 ​ဒီလိုအိမျ​💞